Gaarisa: Faahfaahin Ka Soo Baxaysa Qarax Maanta Lagu Weeraray Ciidamo Kenyan ah Iyo Digniin Lasoo Saaray | RBC Radio	Home
Friday, September 14th, 2012 at 04:23 pm	/ 30 Comments Friday, September 21st, 2012 at 08:39 pm Gaarisa: Faahfaahin Ka Soo Baxaysa Qarax Maanta Lagu Weeraray Ciidamo Kenyan ah Iyo Digniin Lasoo Saaray
Nairobi (RBC) Ugu yaraan toddoba ruux oo ay ku jiraan shan sarkaal oo booliska Kenya ka mid ah ayaa ku dhaawacmay qarax miino loo adeegsaday oo maanta duhurnimadii lala beegsaday ciidamo ka tirsan booliska wadanka Kenya.
Qaraxan ayaa ka dhacay magaalada Gaarisa waxaana weerarka qaraxa ah uu ku dhacay baabuur ay wateen ciidamada Kenya. Illaa labo ruux oo rayid ah ayaa ku dhaawacmay qaraxa sida ay sheegtay warbaahinta Kenya.
Qaraxan ma jirin cid sheegatay illaa hadda inkastoo ururka Al-Shabaab ay horey ugu hanjabeen inay weeraro ku qaadi doonaan goobaha muhimka ee ku yaalla wadanka Kenya.
Qaraxyada iyo weerarada dilka ah ayaa ku badnaa gudaha magaalooyinka ay maamulaan Kenyanka tan iyo markii ciidamada Kenya ay toos u soo galeen Soomaaliya sanadkii hore.
Digniin soo baxday
Dhanka kale booliska Kenya ayaa galabta soo saaray digniin ku wajahan dadka Kenyanka ah oo ay u sheegeen inay feejignaadaan kadib markii ay ka warheleen warar sheegaya in shan ruux oo ka tirsan ururka Al-Shabaab ay gudaha u soo galeen Kenya iyagoo qorsheynaya weeraro waaweyn oo lagu qaadi doono goobo muhim ah oo dadku ay ku badan yihiin.
Digniintan oo loo diray warbaahinta ayaa lagu sheegay in shanta nin oo dhalasho ahaan ka soo kala jeeda wadamada Masar, Morooko iyo Faransiiska ay ka soo bexeen magaalada Kismaayo usbuucii labaad ee bishan Sebtembar ayna soo galeen Kenya si ay weeraro uga fuliyaan magaalooyinka Kenya.
1 Response for “Gaarisa: Faahfaahin Ka Soo Baxaysa Qarax Maanta Lagu Weeraray Ciidamo Kenyan ah Iyo Digniin Lasoo Saaray”
Dahabi says:	September 21, 2012 at 10:15 pm	Al shabaab waa dadkii aduunka laga nacay oo dhan bal eeg inta qoloee kamida